Zvaunofanira kuita muCuzco (Peru): gwara rinoshanda rekushanya kwako kuguta | Kufamba Nhau
Zvaunofanira kuita muCuzco (Peru): gwara rinoshanda rekushanya kwako kuguta
Lola curiel | | General, Peru
Cuzco yaive iyo guta guru reInca empire uye, munguva dzekoloni, zvakave rimwe remaguta akakosha eViceroyalty yePeru. Saka hazvishamise, nekudaro, kuti chaive chii nzvimbo yemitsipa yehumambo hukuru mu pre-Columbian America nhasi inochengetedza runako rweavo nzvimbo munhoroondo kufema Izvi zvinosimbiswa neUNESCO, iyo, muna 1983, yakazivisa Cuzco Nhaka Yenyika.
Chimwe chinokwezva cheguta racho ndeiro nzvimbo kupfuma. Kuva iri mumakomo eAndes, pamamita 3399 pamusoro pegungwa, ine mamiriro ekunze akasarudzika ayo anoipa hukuru hwakasiyana-siyana. Saka, kana iwe uri kushanya kuPeru, Cuzco nenzvimbo dzayo dzakatenderedza dzinofanirwa kuve yekumira kwekumanikidza munzira yako.
Saka kuti usarasikirwa nechero nzvimbo dzepanyama, hupfumi hwekuchera matongo uye zvivakwa munzvimbo iyi, ini ndichakupa mune ino positi nyora nenzvimbo dzinonakidza dzekushanyira muCuzco uye ini ndichakupa ruzivo nezve zviitiko nezverwendo zvaungaite pedyo neguta.
1 Chii chekushanyira muguta reCuzco
1.1 Iyo Inca musimboti weCuzco
1.1.2 Dombo remakona gumi nemaviri
1.2 Nzira kuburikidza nenhaka yeViceroyalty
1.2.1 San Blas nharaunda
1.2.2 Cuzco Cathedral
1.2.3 Machechi eCuzco
1.3 Svika pakuziva iro guta kubva kune imwe nzira
1.3.1 Musika weSan Pedro
2 Ndeapi mafambiro aungaite kubva kuCusco
3 Matipi anoshanda erwendo rwako kuenda kuCusco
3.1 Ungachinja sei mari muCusco
3.2 Nzira yekutenderera sei Cuzco
3.3 Tikiti yeCusco yevashanyi
3.4 Mahara Mahara
3.5 Chenjera nezvekukwira kurwara!
3.6 Mvura uye chikafu
Chii chekushanyira muguta reCuzco
Iyo Inca musimboti weCuzco
Sekureva kwenhema yekutanga, Cuzco yakagadzirwa mamireniyoni apfuura nekugadzirwa kweQuechua mwari weZuva, Inti. Kunyangwe varipo ngano dzakasiyana dzakatenderedza kuvambwa kweguta, Ini ndichagovana newe iyo yakaparadzirwa neInca Garcilaso de la Vega. Yaive yekutanga iyo yavakandiudza ini pandakasvika muCuzco uye, pamwe nekuda kweizvozvo, inotora nzvimbo yakakosha mundangariro dzangu.
Maererano nengano, zviuru zvemakore apfuura mwari wezuva akatumira vaviri vevanakomana vake panyika, Manco Cápac naAmai Ocllo, nebasa rekutanga guta idzva. Hama dzakayambuka Gungwa reTiticaca nechikepe tsvimbo yegoridhe iyo, payakasvika nhasi Cuzco, yakarovererwa pasi nekurova kamwe chete. Nekudaro kwakatemwa kuti ndeipi inofanirwa nzvimbo yekumisikidza iro guta idzva
Kunze kwese ngano, chii chinozivikanwa chokwadi ndechekuti Cuzco yaive pakati pesimba reInca Humambo Kunyangwe nanhasi zvisaririra zveimwe yeakakosha uye ekare mabudiriro muSouth America achiri kuchengetedzwa muguta. Kana iwe uchida kuziva Cuzco, iwe unofanirwa kutanga nemidzi yayo, ndosaka ndichida kugovana newe dzimwe dzenzvimbo dzinokubatsira iwe kuti uwane iyo Inca essence yeCuzco.
Qorikancha yaive iyo main Inca tembere yakavakwa muCuzco. Zita rayo rinobva mukubatana kwemazwi maviri echiQuechua: "quiri", goridhe, uye kancha, tembere. Mune ino "tembere yegoridhe" Indi, mwari weZuva ainamatwa. Chimiro chayo chakashongedzwa uye kushongedzwa kwekushamisira chaive mutero kuna mwari. Kumberi kwaive kwakaumbwa nemadziro edombo uye, zvinoenderana nenyaya dzenguva yacho, ine mhando ye muganhu wegoridhe rakachena.
Nehurombo, nekuuya kweSpanish, chimiro chekutanga cheQorikancha chakanyangarika uye, kuchengetedza madziro etembere, imba yemasangano yeSanto Domingo yakavakwa (1963), yekutanga yekuraira kweDominican muPeru. Iyo Inca nheyo dzakafukidzwa nepurasita uye pendi yeKaturike, kusvikira muna 1650 kudengenyeka kwenyika kwakakonzera kuti imba yacho ipunzike zvishoma, kumutsa zvisaririra zvetemberi yekare. Usakanganwa kushanyira Qorikancha, iwo muenzaniso wakanaka we chemasanganiswa mapurani uye mupenyu rkuratidzwa kwematanho akaumba Cuzco nhasi.
Dombo remakona gumi nemaviri
Iyo 12 Angled Dombo, iri paHatum Rumiyoq Street, iri dombo block "green diorite" icho chaive chikamu che Imba yeInca Roca. Pakati pebwe remadziro ine makona gumi nemaviri, Saka zita raro, zvakavezwa pamwe akanyanyisa zvakarurama uye kuti ungana zvakakwana nezvasara zvidimbu. Rudzi urwu rwechimiro, rwakajairika mutsika yeInca, rwakabvumira matombo kuti aiswe pasina chero mhando yedhaka. Idzo dzimba dzemadzimambo nematemberi zvakavakwa nenzira iyi zvichakamira humbowo hwekusimba kwavo.
Imba yacho, yakavakwa nekurairwa kweInca Roca, yaivewo pekugara vazukuru vake kusvika kusvika kweSpanish (XNUMXth century). Munguva yekoloni yakasungwa uye, ichichengeta rakakurumbira madziro senheyo, maSpanish akavaka Imba yeMarquis yeBuenavista neImba yeMarquis yeRocafuente. Pakupedzisira, chivakwa chakapihwa kuchechi ndokuva Imba yaArchbishop. Parizvino, iri zvakare iyo Museum yeChitendero Art yeguta reCuzco.
Kunyangwe a priori iwe uchifunga kuti kuona madziro ematombo hachisi chiitiko chinokwezva, ini ndinokurudzira kuti iwe usasvetuke ichi chinomira kana iwe ukaita yako yekushanya kuCuzco. Izvo zviyero zvebwe uye kukwana kwechimiro hazvisi kukusiya usina hanya. Uye zvakare, kuve mumugwagwa weveruzhinji, haufanire kubhadhara chero chinhu kuti urishanyire uye haufanire kunge uchiziva chero chirongwa, unogona kuchishanyira chero nguva yezuva.
Kana isu tichitaura nezve Inca matongo ekuchera matongo, isu tinofunga zvakananga nezvaMachu Pichu Zvisinei, muCuzco kune dzimwe nzvimbo dzekuchera matongo uye matongo emaguta ekare akakodzera kushanyirwa. Kunyangwe ivo vari mashoma nzvimbo dzevashanyi, ivo zvakaenzana zvinonakidza uye vachipa chikamu chekugara kwako muguta kuti uzviwane, pasina mubvunzo, kubudirira kukuru.
Padyo padyo neCuzco, nezve Kufamba kwemaminetsi makumi matatu kubva kuPaza deArmas, ndiwo Matongo eSacsayhuamán. Iyo yekare Inca nhare iri pamusoro pegomo rakasimudzwa, pane inoshamisa nzvimbo. Muchokwadi, kubva kumatongo iwe unogona nakidzwa nechimwe cheinoshamisa maonero epasi peCusco. "Sacsayhuamán" ishoko rinobva kuQuechua uye rinogona kushandurwa se: "nzvimbo panogutswa gondo", pamwe zita rinopihwa nemakondo anobhururuka pamusoro pebasa rakakura rekuvaka.
Sacsayhumá raive guta chairo, rakakura, iro chete x ha rakachengetedzwa. Iyo yaigara mhando dzese dzekuvaka: zvivakwa zvinoera uye zvemhemberero, dzimba dzekugara, shongwe, migero yemvura ... Muguta reInca muchine makomba, magedhi, madziro neshongwe uye, kunyangwe mazhinji acho akarasika, Zviri nyore kufungidzira kukura uye kubwinya kwazvaive nazvo munguva yakapfuura.
Nzira kuburikidza nenhaka yeViceroyalty
Nguva yekoloni yakachinja zvachose guta reCuzco. Mushure mekuuya kweSpanish, zvivakwa zvakawanda zveInca zvakaparadzwa kana kushandurwa, zvichibatanidza guta umo Iwo maInca masitayera anowirirana nebaroque rinounzwa nevagari. Mushure mekudengenyeka kwenyika muna 1650, zvivakwa zvakawanda zvakavakwa muguta, zvichigadzira Monumental Cuzco inozivikanwa nekuvapo kwezvivakwa zvechitendero. Iyo colonial architecture yeCuzco inoyevedza uye inokodzera kuongororwa zvakadzama. Ini ndinogovana newe izvo izvo, zvirinani kwandiri, zvakakosha mapoinzi kana iwe uchida kufungidzira kuti imarii yeInca yairevei kune Viceroyalty yePeru.
San Blas nharaunda
Iyo Barrio de San Blas yakagadziridzwa zvizere nekusvika kweSpanish, saka iwo muenzaniso wakanaka wekuvakwa kwemakoloni. Migwagwa yaro mikuru, uriri hwematombo uye matanga ayo akagadzwa mumigwagwa anopa ino nharaunda hupenyu hwakakosha uye kufarira kukuru kwevashanyi.
Inowanikwa muPaza deArmas, pane yaive Imba yeInca Wiracocha, iyo Cathedral yeCuzco nhasi mumwe wemienzaniso iri pachena yeBaroque muPeru uye rave iro rinonyanya kukosha tembere yechiKristu muguta rese.
Chechi yakasvika munyika pamwe nevaSpanish vageremo uye, pamwe nayo, nzvimbo zhinji dzekunamatira dzeKaturike uye dzimba dzemamongi dzakavakwa muguta. Muna 1973, Bazi rezvedzidzo rakazivisa Tsika Yenharaunda yeNyika kunzvimbo inoyevedza yeCuzco, kuziva runako uye kukosha kwezvakaitika zvezvivakwa izvi. Kana iwe uchifamba kuburikidza neye yakakurisa Cuzco, Chechi yeKambani uye Tembere yeMercy kushanya kunosungirwa.
Svika pakuziva iro guta kubva kune imwe nzira
Kutarisa hakusi kungoshanyira zvivakwa uye zviratidzo zvezviyeuchidzo. Dzimwe nguva, tinotora mufananidzo wechokwadi weguta rinodzungaira zvisina chinangwa mumigwagwa yaro kana kushanyira misika yemuno nekuona zviitiko zvezuva nezuva.
Iyo yenhoroondo uye yakakosha nhaka yeCuzco hairambike, asi zvakare iri guta racho nderechokwadi chaizvo. Kana iwe uri kutsvaga kunyudza tsika yePeruvia uye uchida tanga kuziva ichi chishongo chePeru kubva kune imwe nziraTeerera kune iyo nzvimbo dzandiri kuzokumbira kwauri pazasi.
Musika weSan Pedro
Inowanikwa padyo nemugwagwa weSanta Clara, Musika weSan Pedro, yakavambwa muna 1925, inoramba iri iyo epicenter yekutengesa kwemuno muCuzco. Zvigadzirwa zvitsva, zvechivanhu zvigadzirwa, maruva, zvinonhuwira, zvakajairwa madhiri zvakaunganidzwa kubva mudura kuenda kudanga, kugadzira a kuputika kwemavara uye zvinwiwa iyo kamwe kamwe inokunyudza iwe mutsika dzePeruvia.
Iwe unonzwa vanhu vachitaura muQuechua, vatengesi vane hunyanzvi vachikwidza manzwi avo kuti vagadzire hupenyu hwavo hwekupedzisira uye iwe uchave uri wevashanyi vasina ruzivo avo vanovhengana nevanhu veCuzco vanouya kuzotenga imomo mazuva ese uye vasingachafarire ruzivo. yenzvimbo imwe neimwe.
Edza madhiri, echikafu chinowanzoitika (nehungwaru kana uine dumbu rakapfava), taura nevanochengeta uye sveta zvese zvinopfuura maziso ako. Kana iwe uchifarira gastronomy uye uchida kuziva tsika yePeruvia ruoko rwekutanga, sanganisira iyo Mercado de San Blas pane yako runyorwa rwe "zvinhu zvekuita muCuzco."
Ini pachangu, chimwe chezvinhu zvekutanga zvandinoda kuita kana ndasvika chitsva kuguta kukwira kuenda kune maonero, iyo yakakwira zviri nani, kukoshesa kukura kwayo. Pukamuqu, ndiyo inzvimbo yakanaka yekufungisisa Cuzco kubva kumatenga.
Inowanikwa ingangoita maminetsi makumi matatu uchifamba kubva pakati penhoroondo, pedyo nemufananidzo weWhite Christ, Pukumaqu maonero echisikigo ayo anokupa iwe isingakanganwike maonero eguta. Kurongeka kwemigwagwa, dzimba dzakatsvuka, zvivakwa zvakaunganidzwa mumupata uye zvikomo zviri kure, zvinoumba mufananidzo weCuzco wausingazokwanise kudzivisa kudanana nawo.
Ndeapi mafambiro aungaite kubva kuCusco
Pamamita 2.430 kukwirira uye mumoyo wesango rinopisa, ndiMachu Picchu. Guta rekare reInca, rakakomberedzwa nemakomo, rave imwe yenzvimbo dzinonyanya kushanyirwa pasi uye Inoonekwa seimwe yezvishamiso zvinomwe zvemunyika yanhasi Handisi kushamisika! Izvo zvakasarudzika zvekuvaka, madziro, masitepisi, anowanikwa pakati pemakore ayo anopa matongo nemashiripiti uye neyakavanzika chaiyo.
heyi nzira dzakawanda dzekuenda kuMachu Pichu Kubva kuCuzco, unogona kusvika nerusununguko (nechitima, nemotokari, kana nebhazi) kana nekuhaya masevhisi eanoshanda. Chaunofanira kuchengeta mupfungwa kana ukaenda wega ndechekuti, kuva nzvimbo ine yakanyanya kukosha nhoroondo, mirau yekushanyira paki yakaoma: iwe unogona chete kupinda uchiperekedzwa negwaro rinotungamira uye unofanira kutenga tikiti rako. Edza kuita nhanho mbiri idzi pamberi, nekukurumidza kana iwe ukaverenga rwendo rwako, nekuti kuve nzvimbo ine vanhu vakabatikana uye panogona kukwana, unogona kurasikirwa nemukana wekuiziva.
Maras ari guta rakanaka rePeru, iri pamamita mazana matatu nemazana matatu pamusoro pegungwa uye anenge makiromita mana kubva kuCusco. Guta diki iri rinozivikanwa nematafura emunyu. Yakagadzirwa mumatanda, iyo anodarika zviuru zvitatu zvematsime emunyu chaiwo ivo vanogadzirisa yakasarudzika nzvimbo iyo isingakusiye iwe usina hanya. Uye zvakare, mukati memigodhi yemunyu, zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva munyu wakatorwa zvinotengeswa. Kana iwe uchida kutora chiyeuchidzo kune mumwe munhu akakosha, iwe unogona kutora mukana wematafura aya, kuti iwe ugone kutora mukana wawo kana iwe uchida kutenga chipo kana yechokwadi chirangaridzo.
Zvinogona kuva enda kuMaras nebhazi kubva kuCuzco uyezve kutora tekisi kubva kuMaras kusvika kumaflat emunyu. Imwe sarudzo ndeyekuhaya zvimwe zve kushanya kunopihwa nemasangano ekushanya anosanganisira kutakura. Kune masangano anopa mukana wekusvika kumigodhi yemunyu nemudhudhudhu kana quad. Chiitiko ichi chinoshamisa, chinokurudzirwa zvikuru kana iwe uchifamba muboka.
Matipi anoshanda erwendo rwako kuenda kuCusco
Ungachinja sei mari muCusco
Kuchinja mari muCuzco kuri nyore, kune dzimba dzekuchinjana kwese kwese, kunyanya pakati penhoroondo, uye mitengo yacho inowanzoita zvine musoro. Usati washandura, uine karukureta yako ita maakaundi acho wega, saka iwe unozoziva kuti yakawanda sei yavanofanira kukupa uye haufanire kupinda nedambudziko rekutsvaga mari kana paine kukanganisa uye wozozviziva gare gare.
Munzvimbo dziri pedyo nedzimba dzekuchinjana uye mumigwagwa yakabatikana yepakati, ivo vanowanzo kukupa iwe chinja kuita nhema. Kunyangwe shanduko yacho ingaite senge inobatsira, Ini handikurudzire nekuti vanogona kusverera maumbirwo emanyepo mauri iwe usina kana kuona.
Nzira yekutenderera sei Cuzco
Neraki, Cuzco iguta iro yakanyatsofukidzwa netsoka. Nekudaro, iwe ungangoda kufamba zvishoma kubva kunzvimbo yezvakaitika uye ungangoda kushanyira nzvimbo dziri kure, saka ini ndichakupa mimwe mirawo nezve zvekufambisa muCusco.
Tekisi muCuzco Ivo zvakachipa kwazvo, kutamiswa kwakatenderedza gumi nyowani dzePeruvia (zvakaenzana ne10 euros). Kana iwe ukaenda muboka, iri sarudzo yakanaka uye mutengo unodhura kwazvo.
Kazhinji, vanhu vakatendeseka. Nekudaro, kuve vashanyi isu tinogara tichiita njodzi yekukwiridzirwa nemitengo yedu kana yekupinda mutekisi yepirate tisingazvizive (muCuzco mune). Kuti udzivise iyi mhando yemamiriro ezvinhu, zvakanakisa kumisa mumwe munhu ipapo mumugwagwa uye kubvunza kuti rwendo rwacho runowanzotora zvakadii. Ichakupa iwe mutengo uyo unozokubatsira iwe kutonga kana mutyairi wetekisi ari kukupa iwe chaiwo mitengo. Usati wakwira, edza kubvumirana pachiyero nemutyairi, iwe unodzivirira matambudziko. Zvisinei, ndinofanira kutaura kuti ini handina kumhanyisa mune chero dambudziko.
Mabhazi muCuzco Dzinotungamirwa nemakambani akazvimirira. Motokari yega yega ine chikwangwani chinoratidza kwavanoenda. Mutengo wetikiti uri kutenderedza 0,70 soles, iyo ingangoenzana neinosvika gumi neshanu eecents uye iwe unobhadhara mukati mebhazi. Zvinoitika kazhinji, maminetsi maviri kana matatu ega ega.
Tikiti yeCusco yevashanyi
Iyo Cuzco Yekushanya Tiketi ishamisi chaiyo. Inoshanda semhando ye vocha inobvumidza kuwana nzvimbo dzevashanyi vanofarira munzvimbo iyi. Kune mhando dzakasiyana dzematikiti: iyo yakakosha yekushanya tikiti, iyo inokutendera iwe kushanyira inokwana gumi nenomwe nzvimbo; uye matikiti akasarudzika, ayo anotendera kupinda kune dzimwe nzvimbo dzirimo runyorwa.
Kana iwe uchizove uri muCuzco kwenguva yakareba, ini handifunge nezvazvo. Kunyangwe iyo BTC isingasanganise iyo yekupinda kuMachu Picchu, yakakosha uye inomiririra kuchengetedza kukuru paunopinda munzvimbo dzekufananidzira dzeguta.
Hazvina kufanana kushanyira Cuzco chete pane nerubatsiro rwemutungamiri. Iyo mahara emahara mwanakomana yakakurudzirwa kwazvo kune vafambi vanoda kuziva nhoroondo yezvakaitika kubva kukona yega yega yavanowana mune yeguta rekare reInca Humambo.
Kune makambani akasiyana anoaronga uye, kazhinji, vanobva kunzvimbo yenhoroondo yeguta. Iko kuvhiya kuri nyore kwazvo, iwe unonyoresa (unogona kuzviita kuburikidza neinternet) uye pakupera kwekushanya iwe unopa gwara mari yaunofunga kuti yakakodzera.
Chenjera nezvekukwira kurwara!
Kuve akareba mamita mazhinji pamusoro pegungwa, mushanyi anoshanyira Cuzco anogona kusangana neinotyisa "kukwirwa kwekurwara". Kunyangwe zvisingafadzi uye kune avo vane nguva yakaipa kwazvo Zvinowanzoitika kana iwe uri mukati meguta kwemazuva akati wandei. Kuomarara kwezviratidzo kunoenderana nenyaya imwe neimwe, asi kazhinji kunotungamira kuchizungu, kusvotwa uye kutemwa nemusoro.
Kuti udzivirire kukwira kumusoro, zvakanakisa zorora zvakakwana, usadye zvakanyanya kudya, uye unwe mvura yakawanda. Ikoko vanotsenga mashizha ecoca kuti varwe nayo. Kana iwe uri mumwe weavo vanotambura zvakanyanya zviratidzo uye "kukwirira kwekurwara" kuri kunetsa rwendo rwako, unogona kubvunza kune chemishonga, kune mimwe mishonga inozvigadzirisa.
Mvura uye chikafu
Kana iwe uri mutorwa, hazvikurudzirwi kunwa mvura yepombi muPeru. Kunyangwe vamwe vemuPeru vanozvitora vasina matambudziko, zvinogona kunge kuti iwe, usinga kujaire, zvinogona kukunetsa. Zviri nani kuti usatore njodzi uye nekunwa chete yakasvinwa kana yemumvura mvura.
Kana zviri zvekudya, zvimwe chete zvinoitika. Haisi iyo chikafu chemumugwagwa chakashata kana chakashata, asi inogona kuve nehasha kune isina kujaira dumbu. Ive nekuchengera zvaunoedza uye nekutakura mimwe mishonga yekurwisa manyoka, zvingangoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Zvaunofanira kuita muCuzco (Peru): gwara rinoshanda rekushanya kwako kuguta
Chii chaungaona muOurense